२२ लाख पुगे डिम्याट खाता खोल्नेहरू, के हो डिम्याट खाता, कसरी खोल्ने? – AB Sansar
२२ लाख पुगे डिम्याट खाता खोल्नेहरू, के हो डिम्याट खाता, कसरी खोल्ने?
December 2, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on २२ लाख पुगे डिम्याट खाता खोल्नेहरू, के हो डिम्याट खाता, कसरी खोल्ने?
अहिलेसम्म २१ लाख ९९ हजार ६७ जनाले डिम्याट खाता खोलेको क्लियरिङका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए। यद्यपि कतिपयले दुई खाता खोलेको पनि हुन सक्ने उनले बताए।यस्तो खाता दुईभन्दा बढी खोल्न भने पाइने छैन। दुईभन्दा बढी खाता खोलेमा रद्द हुने प्रावधान रहेको न्यौपानेले बताए।
असार मसान्तसम्म डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या १६ लाख ८६ हजार १०२ थियो। साढे ४ महिनामै ५ लाख १२ हजार बढीले डिम्याट खाता खोलेका छन्। यसले सेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ताको संख्या बढेको पुष्टि गर्ने प्रवक्ता न्यौपानेले बताए।
अंग्रेजी शव्द ‘डिम्याट्रिलाइज्ड’को छोटकरी शव्द नै डिम्याट हो। नेपालीमा यसको अर्थ अभौतिक खाता हुन्छ।विभिन्न कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री हुँदा पहिले भौतिक अर्थात कागजी प्रमाणपत्रकै रुपमा हस्तान्तरण हुने गर्दथ्यो।अर्थात सेयर बेच्नेले प्रमाणपत्र नै दिने, खरिद गर्नेले फेरि आफ्नो नाममा प्रमाणपत्र नै पाउँथे। २०७२ माघ २ गतेबाट डिम्याट खाता पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको हो। हाल सेयर अभौतिक रुपमा अर्थात यहीं डिम्याट खातामा सिधै हस्तान्तरण हुन्छ। जसरी हामीले बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्छौं, त्यसैगरी डिम्याट खातामा किनेको सेयर आफै जम्मा हुन्छ। प्राथमिक सेयर (आइपिओ) भरेपछि परेमा खातामै जम्मा हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो बजारमा सेयर बिक्री गर्दा खाताबाट सेयर संख्या घटेर खरिद गर्नेको डिम्याट खातामा जम्मा हुन्छ। यही सेयर जम्मा हुने खाता नै डिम्याट खाता हो।
यो खाता विभिन्न बैंकका सहायक कम्पनीहरुमा खोल्न सकिन्छ। सहायक कम्पनी भएका बैंकहरुले नै यस्तो खाता खोलिदिन्छन्। ७६ वटा यस्ता निक्षेप सदस्य छन्। यस्तो खाता खोल्नका लागि बैंक खाता नम्वर, नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी र फोटो चाहिन्छ। आफूले कारोबार गर्ने बैंक वा ब्रोकर कम्पनीमै यस्तो खाता खोल्न सकिन्छ। धेरैले यस्तो खाता खोलेवापत कुनै शुल्क लिँदैनन्। केहीले एक सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सक्नेछन्। डिम्याट खाता खोलेपछि तपाईंलाई १६ अंकको डिम्याट खाता नम्वर प्राप्त हुन्छ। सो नम्वर पाएपछि मात्रै तपाईंले प्राथमिक सेयर भर्न वा दोस्रो बजार (नेप्से)बाट खरिदबिक्री गर्न सक्नुहुनेछ।
कोरोनाका बेला शुल्क ढिलो बुझाएको भन्दै नोबेल मेडिकल कलेजले तिरायो विद्यार्थीलाई जरिवाना
कैलाली भासु भिर जीप दु:र्घटना : ३ घाइते २ जनाको मृ:त्यु !!
सारा नेपालीलाई रुवाउदै गय कन्चन सधैको लागि हामी बिच बाट।(भिडियो हेर्नुस)
March 7, 2021 March 7, 2021 Ab-संसार